Lever & Knob Door Izibambo Umkhiqizi kanye Umthengisi eChina
Ucingo: + 86- 760- 22822296 Cela Isampula Yemahhala
Izibambo Zeminyango Ye-Lever
Amaphakethe we-Door Lock Combo
Enye ye-The Best Door Isingatha Ukukhiqizwa eChina
Isikhungo Semikhiqizo yeTiffanthy
Njengoba uchwepheshe umnyango izibambo nomkhiqizi eChina, sinikeza izinhlobo iminyango izibambo zihlanganisa isigwedlo iminyango izibambo, izibambo izibambo, deadbolt izingidi, futhi combo amaphakethe ngamanani wholesale amakhasimende ethu.
Dlulisa amehlo kusikhungo semikhiqizo
Isevisi Yokukhiya Umnyango we-OEM ne-ODM
E-Tiffanthy, ungathola izibambo zesiko kanye ne-lever handles kanye nensizakalo yokukhiya ye-deadbolt yomkhiqizo wakho, imininingwane yephakeji, nedizayini eyingqayizivele yebhizinisi lakho le-wholesale nokusabalalisa
Thola i-OEM ne-ODM Service
Tiffanthy Hardware - Enye ye-Best Lever & Knob Door isingatha Abakhiqizi eChina
Ngenxa uchwepheshe isigwedlo & knob umnyango izibambo nomkhiqizi e China. Sinefektri namahhovisi ethu atholakala eChina futhi sinikela ngezinhlobo ezahlukahlukene zezibambo zeminyango nezikhiye, kufaka phakathi izibambo zeminyango, izibambo zeminyango enezikhiye ze-deadbolt, izingidi zerim, namaphakethe e-combo pack. Ukuzibophezela kwethu ukunikela ngezibambo zezicabha ezisezingeni eliphakeme futhi ezisezingeni eliphakeme nezinsiza ongazithola emakethe.
Inkampani yethu ingenye yeminyango engcono kakhulu yokuphatha abahlinzeki emakethe futhi sihlala silwela ukuletha izixazululo ezinamandla, ezinokwethenjelwa nezinenjabulo yokusebenzisa ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, umnyango ngamunye usingatha imikhiqizo esiyithengisayo iza ne-ANSI grade 3 standard.
Siphinde saqinisekiswa ngokuphelele futhi silandela zonke izidingo zomkhakha ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezimangazayo, zekhwalithi enhle kakhulu futhi uzohlabeka umxhwele kakhulu ngemiphumela oyithola njalo.
Yiziphi Izinhlobo Zezicabha Esizinikezayo?
Izibambo Zeminyango Ye Knob
Umnyango Khiya Ibhokisi
Izibambo Zezicabha Nezikhiye
Njengomunye wabakhiqizi bezicabha abahamba phambili eChina, Sinikela ngezinhlobo ezahlukahlukene zokubamba iminyango yokuphepha eshibhile ngamalokhi kumakhasimende anezintengo ezidayiswayo
Dlulisa amehlo kuzibambo Zezicabha
Izikhiye ze-Cylinder Deadbolt
Ilokhi le-cylinder deadbolt luhlobo lwendawo yokukhiya ekhaya evame ukufakwa eminyango yangaphandle, esangweni, noma emnyango omkhulu wokungena endlini.
Amalokhi okhiye we-cylinder deadbolt ngokuvamile ayadingeka ukunikela ngokuvikelwa okungeziwe ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo bomndeni wakho.
Dlulisa amehlo ku-Deadbolt Locks
Izibambo Zethu Zamuva & Izibambo Zezicabha Zethu kanye Nezikhiye
Zonke 10 /Isilinda Lever Lock 0 /Cylindrical Knob Lock 0 /Izikhiye ze-Deadbolt 0 /Izibambo Zeminyango Ye Knob 5 /Izibambo Zeminyango Ye-Lever 5 /I-Lock Set 0 /Ukukhiya okulinganayo 0 /I-Tubular Knob Lock 0 /I-Tubular Lever Lock 0
Atrium eyisilinda Lever Lock Nge Lever isibambo For Baby Ubufakazi 700
Ukhiye Wokungena Wokhiye Obekelwe Isango Lokulala Ngaphandle 9560
I-Nickel Epholishiwe Eyisikhiye Sesicabha Sesicabha Esishelelayo Ngomnyango T700
Insimbi Yomnyango Engagqwali Ngekhiya Nokhiye Womnyango Wokulala 589
Ubungani Matte Black Lever Door Izibambo Zamagumbi Okulala T6411
Izikhiye Zomnyango Wezokuphepha Kwezingane Ezindilinga Ngezikhiye Zesango Lesitolo 701
Ukungena Komnyango Wokukhiya Isango Lomnyango Wangaphandle Nomnyango Wokulala 5791
I-Brass Epholishiwe Enokhiye Wengcango Yangaphambili Yesango Nge-Lock Lock 8805
ICylindrical Door Knob Lock Enokhiye wegumbi lokulala kanye nomnyango wangaphambili 586
Ingaphandle le Knob Lock Sethelwe umnyango wokungena nomnyango wokugeza 5731
Udinga Usizo Nge-OEM & ODM Door Handls Service?
Amathimba ethu okusekela ayatholakala ukusiza ngezidingo zomkhiqizo nokuphendula noma imiphi imibuzo, sicela usishayele ucingo +86 -760- 22822296 noma uthinte ithimba lethu ukuxoxa ngezidingo zakho.
Q1. Ingabe inkampani yokuhweba noma umkhiqizi?
Impendulo: I-Tiffanthy ingenye yabakhiqizi be-lever & knob yemishini esebenza kakhulu eChina eyaqala ngo-2008. Siyakwamukela ekuvakasheni kwakho.
I-Q2: Ingabe inkampani yakho inikezela ngamasampuli?
Impendulo: Yebo, singathumela izibambo zeminyango namasampula okhiye ngaphambi kokuthumela izimpahla noma nje wena ukuhlola ikhwalithi.
I-Q3: Ngingakwazi yini i-OEM noma ukuphrinta uphawu lwami lomkhiqizo kumkhiqizo wakho?
Impendulo: Ama-oda we-OEM amukelekile kakhulu. Sicela usibhalele imininingwane yombala we logo yakho, isikhundla selogo; ibhukwana lomsebenzisi ngaphambi kokuthi usithumelele uphenyo, ngale ndlela singakunika impendulo enembile kunazo zonke okokuqala.
I-Q4: Ingabe uzenza izibambo zeminyango ngokwezifiso nemikhiqizo yokukhiya ngokuya ngemidwebo yethu yomklamo?
Impendulo: Yebo, isibambo sethu sesibambo kanye neqhina liphatha ifektri ingumkhiqizi we-OEM wesibambo onethimba lobunjiniyela elinolwazi ukukhiqiza isibambo sangokwezifiso kuye ngemidwebo noma amasampula amaklayenti.
I-Q5: Ngikhokha kanjani ukuthenga kwami?
Impendulo: Samukela izindlela zokukhokha ezilandelayo: T / T, L / C, inyunyana yaseNtshonalanga, ukheshi, njalonjalo. Imvamisa i-30% T / T kusengaphambili, futhi ibhalansi ngaphambi kokuthumela.
I-Q6: Uliqinisekisa kanjani ikhwalithi yomkhiqizo?
Impendulo: sinaka kakhulu ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Ngaphambi kokufakwa kwesibambo, i-QC yethu izohlola ngokuqinile imikhiqizo. Futhi, sinikeza iwaranti yeminyaka emibili ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu yokubamba iminyango ingasetshenziswa ngokuzethemba.
I-Tiffanthy Door Isingatha Ukubuka Kokukhiqiza
I-Lever Door Iphethe
Isilinda Umnyango Lever Nge Push Inkinobho Lock For Ingaphandle Door 6411May 12, 2020 - 4: 46 am
Izikhiye Zomnyango Wezokuphepha Kwezingane Ezindilinga Ngezikhiye Zesango Lesitolo 701May 12, 2020 - 4: 40 am
Atrium eyisilinda Lever Lock Nge Lever isibambo For Baby Ubufakazi 700May 12, 2020 - 4: 23 am
Ungayikhetha Kanjani i-Lever Door Handle? January 6, 2021
Ungakhetha Kanjani Izinkinobho Zomnyango Wekhaya Lakho? July 1, 2020
Yini i-Door Knob-Isingeniso Esiphelele Kunazo Zonke June 30, 2020
Ucingo: + 86- 760- 22822296
Ikheli: NO.51 Liande Street, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong 528414, China
Cela Isampula Yemahhala